Xuseen oo Dalka laga Masaafurinayo kadib 10 Sano oo uu ku noolaa
HomeWararka CaalamkaXuseen oo Dalka laga Masaafurinayo kadib 10 Sano oo uu ku noolaa
January 20, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Foto: Marie Dahlén/Centrum för Rättvisa
Ka dib in ka badan toban sano oo uu Iswiidhan ku qaatay Ramiz Hussain oo ah xirfadle hindise app-ka ah, ayaa hada lagu amray inuu dalka iskaga tago sababo la xiriira Qaladaad uu ku sameeyay dhanka caymis.
Horaantii bishan ayay ahayd markii maxkamada racfaanka ee laanta socdaalka ay diiday in ay dib u eegis ku sameyso kiiskiisa,taasi oo ka dhigan in go’aankii maxkamada darajada koowaad ee dalka ay ku diiday degenaanshaha uu sii jiro,sidaas darteed waxaa laga codsaday in uu dalka Sweden uga baxo muddo afar todobaad ah.
Xuseen oo maanta u warramayay Raadiyo Sweden ayaa sheegay in uu boorsooyinkiisii ​​xirtay si uu dalka uga dhoofo, uuna go’aansaday in uu iska illaawo wixii soo maray oo uu mustaqbalka eego.
Wuxuu intaas ku daray inuu aadi doono Hindiya si uu ula kulmo waalidkiis markii ugu horreysay laba sano gudahood, ka hor inta uusan u safrin Jarmalka , halkaas oo uu dhowr wareysi shaqo ah la yeelan doono shirkadaha teknolojiyadda.
“Ma walwalsani, shirkado badan ayaa muujiyay xiisaha ay ii shaqaaleysiinayaan,” ayuu yiri Xuseen. Nidaamka Jarmalku waa mid ka dabacsan kana cadaalad badan kan Sweden.”
Hussain ayaa Sweden ka yimid sanadkii 2010, isagoo ka yimid dalka Hindiya , si uu shahaadada Masterka ee cilmiga kumbuyuutarka uga soo qaato Jaamacadda Umeå, wixii markaas ka dambeeyay wuxuu u shaqeeyay shirkado badan oo Iswidhish ah oo dhanka tignoolajiyada ah, isagoo ahaa khabiir dhanka codsiyada ah.